NAIROBI Dhallinyaro Kenyan Ah Oo Ikhtiraacay Qalab Tiknoolaji Beeralayda Faa’iido U Leh | Haqabtire News
NAIROBI Dhallinyaro Kenyan Ah Oo Ikhtiraacay Qalab Tiknoolaji Beeralayda Faa’iido U Leh
May 19, 2016 - Written by Wariye Hanad
-Shirkad ka shaqaysa tignoolajiyadda beeraha oo dalka Kenya ah, ayaa soo saartay qalab tignoolaji ah oo beeralayda u saamaxaya in xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa beerahooda kala socon karaan moobillada (Smart Phones).
Shirkaddan oo magaceeda la yidhaa Illuminum Greenhouse, waxa ay beerlayda Kenya iyo kuwa kale ee Afrika u fududaynaysaa, gaar ahaan kuwa khudaarta soo saara (greenhouses) in ay u ikhtiraacday qalab cusub oo u suurtogalinaya in dhaqdhaqaaqa beertooda kala socdaan farriin moobilka ugu soo dhacaysa.
Koox dhallinyaro reer Kenya ah oo shirkaddan tiknoolajiyadda beeraha ka shaqaysa sameeyey, ayaa hormood u noqon doona in beeralayda Afrika ay casriyada la shaqeeyaan beero-falashadana ku guulaystaan.
Laba nin oo saaxiibbo yaraantoodii ahaa, lana kala yidhaa Brain Bett iyo Taita Ng’etich, ayaa la yimmi fikradan iyagoo wali ku jira kuleejka waxbarasho. Waxa kaloo ku biiray Alice Keamau oo dajinta qorshaha mashruucan masuul ka ah iyo Damaris Karanje oo dhinaca isgaadhsiinta u qaabilsan dhallinyaradan.
Shirkadda Illuminum Greenhouses waxay sheegtay in beerlayda ay moobiladooda ugu shubi doonto qalab beertooda ku xidhan karaan si ay ula socdaan, halkaasna uga maamulaan baahida beertoodu u baahan tahay si wax-soo-saarkoodu u kordho.
Waxyaabaha qalabkan casriga ah uu sheegaayo waxa ka mid ah heer-kulka, huurka, qoyaanka ciidda iyo sida beertu biyaha ugu baahan tahay, si toos ahna waxa uu farriin ugu dirayaa mulkiilaha beerta si uu ula socda xaaladaha beertu ku baxdo ee u baahan in si degdeg ah wax looga qabto.
Sidoo kale, faa’iidooyinka qalabkan dhallinyaradu sameeyeen waxa ka mid ah inay ku shaqaynayso cadceedda oo aanay u baahnayn koronto, kaasoo dadka beerahoodu baadiyaha ku yaallaan ka faa’iidaysan karaan tamarta cadceedda.
Shirkaddu wax ay hore u samaysay 139 beer (Greenhouses)ah, waxaanay hadda u adeegtaa 600 beeralay ah.